SAFRKAYGII DALKA JIBUTI
June 17, 07: Inta beri oo laga joogo markii xabashidu gashay: Kismaayo (168), Muqdisho (172), Beledweyne (175), Baydhabo (183), Galkacyo (204), Sarbeebtii Diinaari
Abaaraha 6dii maqribnimo ayey ka duushay diyaardii aan la socday aniga iyo koox suxfiyiin ah garoonka diyaaradaha Magaalada Boosaaso anogoo ku sii jeedna dalka jamhuuriyda jibuti.
Waxay diyaaradu cirkaa sii haadaba waxaan cago dhiganay garoonka caalamiga ee Jibuti 750 daqiiqo.
Waxaan halkaasi nagu soo dhoweyey rag u diyaarasanaa imaatinkayaga isla markiiba waxaa naloo galbiyey dhanka laanta sodcaalka halkaasi aan kala kulanay soo dhoweyn lixaad leh waxaa nala ka qaaday basboordii oo daqiiqad ka dib iyagoo Vissa ku taalo naloo keenay waxaan u sii dhaqaaqnqy dhanka magaalada.
Runtii xiligaan magaalada jibuti waa kuleeyl waxase dadka halkaasi degani ku dadaaleen in aan inta badan la arag waayo meel walba waxaa ku jira qaboojiye.
Magaalada jibuti oo xili hore iigu danbsay waxaa ku dhacay is bedel xoogan oo dhanka dhismayaasha ah waaayo xiligaan waxaa ka muuqda bilicsami aad u xoogan dhanka huteelada guryaha waxaa aad u kordhay gancsigii gawaarida aadka u quruxda badan.
Dadka reer jibuuti ayaa laftooda ah dad soo dhoweyn wacan marka loo eego dalalka kale ee afrika lakiin waxaan dareemay in afkii soomliga ka soo dabar go'aayo waayo inta badan dadkii aan la kulamay intii aan joogay ma jirin wax ku hadlaaya afka soomaaliga.
Intaasi ka dib waxaan bilaabay in aan booqdo degaanda Cali sabiix Carta oo ah degaano ku teedsan dalka jabuuti runtii tuulda Carta shirkii soomaalida ka dib waxaa ku kordhay dhismayaal xogan oo waxaa hantidooda geliyey ganacsatda reer JIBUUTI si ay ugu dalxisaan ama ugu xagaa baxaan.
Amaanka dalka jibuuti ayaa runtii ah mid ilaah loogu mahadiyo waayo, xitaa waxaa indhahygu qabteen intii aan ku jiray safarka dhulkaa dad cadaan ah oo keligod gawaari qurxoon ku wata degaano ka baxsan magaalada jibuuti iyo gudaheeda.
Jibuuti waxaa ka socda xiligaan u diyaar garoow xoogan oo lagu xusaayo xiligii ay qaateen xoriyda waxaana xiligaan ku soo qul qulqyqo saxfiyiin ka kala yimi daafaaha dunida kuwaasai ay la ciirciiryaan huteelda magaalada.
Dhanka kale saakay waaxan booqasho ku tegay degaanka kuudka Xubuli Arxiiba ; Siis iyo degaamada loo yaqaan karaatooyiinka oo oo ah dhowr xaafdood.